Goobta la doonayay in lagu weeraro Gaarigii Zoobe ku qarxay iyo Ninkii waday oo la ogaaday!! * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Goobta la doonayay in lagu weeraro Gaarigii Zoobe ku qarxay iyo Ninkii waday oo la ogaaday!!
By A warsame	 Last updated Oct 18, 2017
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa Dalka Ingiriiska oo xiganaya saraakiil uu qariyay Magacooda ayaa Weerarkii 14kii Bishan ka dhacay Muqdisho ka qoray warbixin uu dhinacyo badan kaga eegayay.
Wargeysku waxaa uu sheegayaa in weerarka uu ku wajahnaa Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho,kaas oo la doonayay in Gaariga ku qarxay Soobbe gugaha Garoonka lagu qarxiyo.
Warbixintu waxaa ay sheegeysaa in Gaariga Noah-da ee Ciidamada dowladda ay ku qarxiyeen Xaafadda CeelQalow ee Degmada Wadajir uu ujeedkiisu ahaa in uu ku qarxo Koontaroolka Danwadaagta ee laga galo Garoonka Aadan Cadde.
Marka Gaariga yar uu Qarxo oo ay cabsi iyo kala carar galaan Askarta ayuu qurshuhu ahaa in Gaariga weyn ee ku qarxay Isgoyska Soobbe uu isna ku qarxo Garoonka Aadan Cadde gaar ahaan Al-baabka Madina Gate.
The Guardian waxaa uu sidoo kale sheegay in weerarkaas uu ahaa aargoosi uu sameeyay Askari horay uga tirsanaa Ciidamada dowladda Soomaaliya kaas oo 2010kii Ciidamada dowladda ku biiray hayeeshee 5; Sano ka hor isaga baxay kuna biiray Al-shabaab.
Wargeysku ma sheegayo magaca Askariga iyo saraakiisha kale ee xogtan siinaya,waxaana uu sheegayaa in sababta Askariga hore ee ka tirsan Al-shabaab weerarka u geystay ay tahay in Ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka ay hadda ka hor weerareen tuulada uu ka soo jeedo oo ay dad badan ku dhinteen.
The Guardian waxaa uu sheegayaa in Ninkan uu ka aargoosanayay Ciidamada dowladda ee Tuulada Bariirre weeraray Bishii August ee Sanadkan,halkaas oo lagu dilay 10 Qof oo ay ka mid ahaayeen Carruur da’doodu u dhaxeyso 6-10 Sano jir.
Mugga waxyaabaha qarxa ee saarnaa Gaariga ayuu Wargeyska ku sheegayaa in ay gaarayaan 350kg,waxaana lala damacsanaa Garoonka Aadan Cadde oo ay degganyihiin inta badan Safaaradaha Reer Galbeedka sidoo kalena ah Saldhigga ugu weyn ee Ciidanka AMISOM ku leeyihiin Soomaaliya.
The Guardian waxaa uu sheegayaa in Ninka Gaariga yar watay lagu qabtay Xaafadda Ceel-Qalow uu horay ugu dhaawacmay weerar Sanadkii 2012kii ka dhacay Hotelka Jazeera ee Magaalada Muqdisho,kaas oo lala beegsaday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligaas la doortay hayeeshee aan talada la wareegin.
Warbixinta waxaa ay intaas ku dareysaa in labada Gaari ee weerarradaas geystay lagu soo diyaariyay degaanka Bariirre ee Gobolka Shabeellaha hoose oo ay dhawaan ka baxeen Ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Saraakiisha la hadashay The Guardian ayaa sheegay in dhamaan Ciidamada iyo saraakiisha ku sugnaa Waddada Ex-Koontrool Afgooye ilaa Soobbe ee uu Gaariga weyn soo maray xilka laga qaaday,halka kuwii ku sugnaa Soobbe ay dhinteen,waxaana kuwa xilka laga qaaday ku socda baaritaan,sidoo kale Wargeyska waxaa uu sheegayaa in milkiilaha Gaariga weyn ee Soobbe ku qarxay uu Xabsi ku jiro.
Warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobey ayey ku sheegtay in ay ku wareysatay 500 oo qof oo horay uga tirsanaa Al-shabaab,waxaana la weydiiyay sababta ay ugu biireen Al-shabaab,71% Dhallinyaradaas waxaa ay sheegeen in dhibaato ay dowladda Soomaaliya u geysatay qaraabadooda ay sababtay in ay ku biiraan Al-shabaab,dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah,dil,dhaawac,xarig iyo waxyaabo kale.
Weerarka 14kii Bishan ka dhacay Muqdisho dowladdu waxaa ay sheegeysaa in ay ku dhinteen 282 Qof,halka gaadiidka Gurmadka deg degga ah iyo Isbilaataallada sheegayaan in dhimashada ay dhantahay 302 Qof,sidoo kalena dhaawaca ka badanyahay,iyada oo 11 Hibsitaal oo ku yaalla Muqdisho ay la tacaalayaan dhaawacyada Weerarkaas,halka kuwo kale oo dhaawacyadaas ka mid ahna loo qaaday dalka dibaddiisa.
Isha: The Guardian.
W/Turjumay Adam Ibrahim Farah
British farmers prepare pumpkins ahead of busy Halloween period
Texas to execute ‘tourniquet killer’ for serial rape and murder